Akụkọ WTTC ọhụrụ iji chụpụ mgbake ma kwalite nkwụsi ike nke ngalaba njem na njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ WTTC ọhụrụ iji chụpụ mgbake ma kwalite nkwụsi ike nke ngalaba njem na njem
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Akụkọ WTTC ọhụrụ iji chụpụ mgbake ma kwalite nkwụsi ike nke ngalaba njem na njem.
Ndị otu Njem Nleta Ọchịchị na Njem Nleta Ọchịchị na Mịnịstrị na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Saudi Arabia na akụkọ ọhụrụ dị mkpa nke na -egosipụta isi ihe iji weghachi agagharị mba ụwa, yana ndụmọdụ iji kwalite mgbake nke ngalaba Njem & Njem Nleta, ebe ọ na -akwalite nkwụsi ike ya.
Ọnụ ego nnwale dị elu yana mmachibido njem na -egbochi nnweta njem ma mepụta usoro elitist.
Na naanị 34% nke ndị bi n'ụwa gbara ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke, ahaghị nhata nke ọgwụ mgbochi na -eyi mgbake akụ na ụba egwu.
Onyinye ngalaba a na GDP zuru ụwa ọnụ dara site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri US $ 9.2 na 2019, ruo naanị ijeri $ 4.7 na 2020, na -anọchite anya mfu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri US $ 4.5.
The World Travel & Tourism Council (WTTC) na Ozi nke njem nleta nke Saudi Arabia wepụtara taa akụkọ ọhụrụ dị mkpa nke na -akọwapụta isi ihe iji weghachite agagharị mba ụwa, yana ndụmọdụ iji kwalite mgbake nke ngalaba Njem & Njem Nleta, ebe ọ na -akwalite nkwụsi ike ya.
Site na oria ojoo a na-ebute njem mba ofesi n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkwụsị zuru oke, n'ihi mmechi oke na oke mmachi njem, Njem na njem nlegharị anya tara ahụhụ karịa mpaghara ọ bụla n'ime ọnwa 18 gara aga.
Ntinye aka nke ngalaba na GDP zuru ụwa ọnụ dara site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri US $ 9.2 na 2019, ruo naanị ijeri US $ 4.7 na 2020, na-anọchite anya mfu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri US $ 4.5. Ọzọkwa, ka ọrịa na -efe efe juputara n'obi ngalaba ahụ, nde ọrụ 62 njem na njem nlegharị anya furu efu.
Akụkọ ọhụrụ a na -eme ka ọ pụta ìhè WTTCAtụmatụ amụma akụ na ụba kachasị ọhụrụ nke na -ekpughere mgbake mpaghara ahụ ga -eji nwayọ karịa ka a tụrụ anya ya n'afọ a, nke jikọtara ya na mmechi ókèala na -aga n'ihu na nsogbu ndị metụtara ngagharị mba ụwa.
Onyinye ngalaba a na GDP ga-ebili site na obere 30.7% afọ na afọ na 2021, na-anọchite anya naanị mmụba ijeri US $ 1.4, na ọnụego mgbake ugbu a, onyinye njem & njem nlegharị anya na GDP nwere ike ịhụ otu afọ ahụ- na-abawanye na 31.7% na 2022.
Ka ọ dị ugbu a, a na-ahazi ọrụ ngalaba ahụ ka ọ ga-ebili naanị 0.7% n'afọ a, na-anọchite anya naanị ọrụ nde abụọ, na-esote 18% na-abawanye n'afọ na-abịa.
Na-anọchite anya nsogbu kachasị njọ maka mpaghara njem na njem nlegharị anya, COVID-19 abụghị naanị emetụta akụ na ụba ụwa, kamakwa ọdịmma na ibi ndụ nke ndị mmadụ n'ụwa niile.
Tupu oria ojoo amalitela imetụta ngalaba ahụ nke ukwuu, Njem njem na njem bụ otu n'ime ngalaba kacha ibu n'ụwa niile, na-ahụ maka otu n'ime ọrụ ọhụrụ anọ emere n'ụwa niile n'etiti 2015-2019 ma bụrụ onye na-enyere aka maka mmepe mmekọrịta akụ na ụba na ibelata ịda ogbenye, na-enye ihe pụrụ iche. ohere nye ụmụ nwanyị, ndị pere mpe, obodo ime obodo na ndị ntorobịa.
Akụkọ ọhụrụ a sitere na WTTC, Na mmekorita ya na Ozi nke njem nleta nke Saudi Arabia na-ekpughe isi ihe mgbu nke na-elekwasị anya na ihe ịma aka ngwa ngwa iji weghachi mmegharị nke mba ụwa, nke e mere site na mkpa ọ dị iji dozie adịghị ike nke mpaghara ahụ gosipụtara n'oge ọrịa ahụ site n'ịhazigharị ọdịnihu na-adịgide adịgide, na-agụnye, na nke na-agbanwe agbanwe.
Akụkọ ọhụrụ a dị mkpa na -egosi ka mmechi ókèala mba ụwa, ejighị n'aka n'ihi iwu na -agbanwe agbanwe, ụgwọ amachibidoro nnwale, na enweghị nnwekọrịta na mwepụ nke ịgba ọgwụ mgbochi egbochila mgbake nke ngalaba njem & njem nlegharị anya n'ime ọnwa 18 gara aga.
Ka ọ na -erule June 2020, mba niile ka nwere ụdị mmachi njem, na -arụ ọrụ dị mkpa na mbenata mmefu mba ofesi site na 69.4% n'afọ ahụ. Mgbochi ndị a, na-agbanwe agbanwe ma na-agbagwoju anya, gara n'ihu na-emetụta ntụkwasị obi onye njem na-ede akwụkwọ, n'ihi na enweghị ụzọ doro anya, ma ọ bụ nkwenye zuru ụwa ọnụ, n'ihe gbasara ihe nyocha chọrọ, iche iche na ụkpụrụ ịgba ọgwụ mgbochi.
Dabere na akụkọ ahụ, nyocha mmetụta ndị njem ọhụụ zuru ụwa ọnụ nke Oliver Wyman bipụtara na -egosi naanị 66% atụmatụ ịga mba ofesi n'ime ọnwa isii na -esote, na ihe na -erughị otu n'ime 10 (9%) debere njem ọdịnihu, na -egosi enweghị ntụkwasị obi na -aga n'ihu. mkpebi onye njem. Nnwale PCR dị oke ọnụ na -aga n'ihu na -enwe mmetụta na -emerụ ahụ na ndị njem, na -atụgharị ọganihu ọ bụla nke ime ka njem nweta ma mepụta ahaghị aha ọzọ.
Julia Simpson, President & CEO WTTC, kwuru, sị: “Ngalaba njem na njem nlegharị anya bụ isi maka ọtụtụ ibi ndụ nke na-aga n'ihu na-emetụta site na enweghị ike ịhazi na ịhazi ụkpụrụ COVID-19 n'ụwa niile. Enweghị ihe ngọpụ maka patchwork nke ụkpụrụ, mba kwesịrị ijikọ aka ọnụ na ime ka iwu dị. Ọtụtụ mba na -emepe emepe na -adabere na njem mba ofesi maka akụ na ụba ha wee bụrụ nke mebiri emebi.
“Dị ka ọ dị, naanị 34% nke ndị bi n'ụwa ka agbachara ọgwụ mgbochi zuru oke, na-egosi na a ka nwere nnukwu mwepu ọgwụ mgbochi oke n'ụwa niile. Atụmatụ ịgba ọgwụ mgbochi ngwa ngwa na ịha nhatanha, yana nkwado mba ụwa niile nke ọgwụ mgbochi WHO kwadoro, ka emepegharị njem mba ofesi n'enweghị nsogbu wee maliteghachi ọrụ akụ na ụba ozugbo.
"WTTC ghọtara mkpa ọ dị iweghachi ntụkwasị obi nke ndị ahịa, anyị etolitela, yana ọha na eze na ndị ọrụ nzuzo na-arụkọ ọrụ ọnụ, usoro nke usoro iwu njem nchekwa akwadoro maka ụlọ ọrụ 11 n'ofe njem njem na njem nlegharị anya. Ihe karịrị ebe 400 n'ụwa niile nakweere stampụ njem Safe Njem anyị zuru ụwa ọnụ."
Onye isi ala Ahmed Al Khateeb, Minista njem maka Saudi Arabia kwuru, sị: "Akụkọ a na-egosi mmetụta COVID-19 nwere na njem njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ - yana enweghị isi nke mgbake na-amalite ugbu a. Anyị kwesịrị ime ka o doo anya: ọ gwụla ma njem nlegharị anya na-agbake akụ na ụba agaghị agbake.
“Anyị ga -agbakọ ọnụ iji kwado ụlọ ọrụ a dị oke egwu, nke tupu oria ojoo kpatara 10% nke GDP n'ụwa niile. Site na akụkọ a, Saudi Arabia na-akpọ maka ngalaba ahụ ka ha gbakọta ọnụ iji megharịa njem nlegharị anya maka ọdịnihu ga-adigide, nsonye na nkwụsi ike. "
Nkwupụta ahụ depụtara ndụmọdụ iji nweta mgbake ngwa ngwa nke ngalaba njem na njem nlegharị anya, ka COVID na-aghọ ọrịa.
Nlekwasị anya dabere na nhazi ụwa iji mepee ókèala, ọnọdụ nnwale ziri ezi, na dijitalụ maka mmezi njem, yana nkwado na mmetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ga -eweghachi ngagharị mba ụwa na mpaghara Njem & Njem Nleta. Usoro ndị a ga-azọpụta ọtụtụ nde ọrụ, ma mee ka obodo, azụmahịa, na ebe ndị na-adabere na njem njem & njem nlegharị anya, nwetaghachi nke ọma ma nwee ọganihu ọzọ.